Jo Nesbø. Makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Mamwe mazwi kubva kuvaverengi vake nezvake | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhema nhema, dzakawanda
Mufananidzo: (c) Brenda Fitzsimons, Iyo Irish Times.
Tempus fugit… Uye pano tiri zvakare mu March 29Zuva rakakura revaverengi avo, kuzviisa zvinyoro, vane chavanofarira Jo Nesbø. Uye kana tikazvitaura tisina kupfava, tinozvinamata. Munyori weNorway, Viking ane tarenda diki asi rakakura renyaya yekuparwa kwemhosva, anowira iyo Makorenda makumi matanhatu nenomwe. Mufaro!
Gore rino rinotipawo iyo chikamu chegumi nembiri yechisikwa chake chinodikanwa uye chinodiwa, komishinari Harry hole. Tichava pamusoro julione banga (Banga). Asi nhasi yave nguva yekumukorokotedza nemazwi mashoma kubva kuvaverengi vake nezve ake mabasa kazhinji. Ndinoda kutenda kunyanya kunhengo dzeboka reFB Akabatwa naJo Nesbø yekugovana zvimwe zvavo mazano yechinyorwa ichi.
Ziva kuti angangoita ese maonero akaunganidzwa anobva vaverengi. Ikoko ndinoisiya ... Ndozvakaitawo vaverengi murume vanga vari zvishoma laziest. Kana pamwe isu tiri sooooo vazhinji varavi vevatema veinovherouye kusasarura kubvuma iwo mavara so zvishoma nezvematongerwo enyika saHarry Hole vanotibata yakadzika fiber.
Ndakawana Nesbø na Robin uye sezvazvinowanzoitika naye Ini ndaida kuverenga basa rake rese rakabudiswa. Nesbø anowana izvozvo Ndinofara, kuti ndinoda uye ndinovenga kune mavara, kuti ndinofungidzira zvisingaite mamiriro uye kuti Harry Hole anowedzera uye mutumwa uye dhimoni. Asi kwandiri Hole haisi yese Nesbø.
Semuenzaniso, ndapedza Macbeth haaite chinhu neyake kuverenga kwave noutsinye. Kutamba kwepakutanga kwaShakespeare ndechimwe chezvandinoda. Pandinouya kunzvimbo iyo Macbeth anozivisa kuti "mweya wangu uzere nezvinyavada," ndinodedera uye ndinoedza kufungidzira munhu akavhungwa nechishuwo, kutsiva, kutambura, kutendeuka, rudo bofu kunaMai Macbeth uye Kupenga. Uye zvese izvi zviri mu rima rinonakidza neNesbø iyo inodzokorodza zvido zveMacbeth, Banquo, MacDuff uye kambani.
El kubudirira kukuru yeNesbø, kubva pakuzvininipisa uye kushuvira kunozivikanwa kune basa reChirungu, ndiko bvunza mune izvo Shakespeare akachengetera. Kuziva hudiki hwaDuff naMacbeth, hunhu hwavo, avo vasina mhosva kana vasina mhosva vanotanga kuda, kuzvininipisa kwavo, pamwe nehupenyu hwaLady Macbeth uye huwandu hwakawanda hwevamwe vanowana izwi, zvave mufaro uyo chete weNesbø aigona kundipa.
Ndakasangana naJo naye Dr proctor, ndikasara kufara kwazvo Ndakatsvaga mabhuku ake evakuru. Ikoko ndiko kukanganisa kwangu ...
Ndakazviwana ne Robin Uye ndakanga ndisingachagoni kumira zvakare! Ini ndakapedza bhuku racho kuva chinhu! Ini ndakadanana nepeni yake uye chimiro chake chakakura, uye chii chakandishamisa kuona kuti raive bhuku rechitatu mune saga reHarry Hole. Izvo expertise mukugadzira nyika mubhuku uko kune zano rinovhara nekuguma kwaro, kana imwe inogona kuenderera mune inotevera ramangwana bhuku (kana kwete). Uye unonzwa sei kuti pane chimwe chinhu munguva yakapfuura, chisingatadzise zvachose kunakidzwa nenhoroondo yebhuku riri kutaurwa, asi zvinokuita kuti ude kuverenga ese apfuura. Mumwe wekupedzisira!
Ini ndinozvizivisa mhedzisiro uye isina mamiriro super megafán Harry Hole nevamwe vatambi. Handina kuzomira kubvira Chiremwaremwa. Kana ndapedza navo vese uye ini ndikachinja chechitatu, ndichave ndakashama.
Nebhuku rega rega rinokurirwa, saka ndiri kutarisira kune inotevera.
Ndine Mugari wenhaka. Hakusi kundirasisa, kunge zvese kubva kuna Jo Nesbø.
Ndinoda NesbøNdiri kudanana naHarry Hole.
Ndakatanga kuverenga Mugari wenhaka uye hongu, ndiri kunyatsoifarira. Ichokwadi kuti peji roga roga randinotendeuka ndinoda kuona HH achigadzira kuuya, asi kwete, handifunge kuti ndichairovha. Nesbø inoonekwa mundima dzese.
Nesbø akatanga pasina yambiro. Ini ndaisamuziva. Hapana munhu akange andiudza nezvake. Ndakaita sendisina kana kutenga.
Mhosva yezvose: Robin, rake rechitatu bhuku uye rimwe ndakasungwa sevazhinji venyu kuverenga saga yese, nekukwakuka nekudzoka sezvo mazita avo aiburitswa muSpain.
Ini handifarire enganonyorwa dzeropa, kana mhirizhonga. Mifananidzo yevanonwa doro, vakadzura midzi uye vakasurukirwa matikitivha zvinoita kunge zvakajairika kwandiri. Kana ini handifarire nharaunda dzehuwori dzakakwirira, kana mudhorobha asi wechitatu pasi pevhu. Uye zvakadaro ndinomuda. Ini ndinoda Harry Hole nababa vake, Jo Nesbø. Ini ndinorota hupenyu hwako hunofadza / husina mufaro, rudo rwako / hukama hwehukama, uye ramangwana rako riri pedyo.
Ndinotarisira kuti mabhuku enyu abude uye ndaverenga nemufaro kusvikira ndaona kuti ndasara nemapeji mashoma uye ndinononoka kuverenga kuitira kuti ndisapedze. Mumusoro mangu ndine mufananidzo weHH, wakafanana chaizvo nababa vake, asi akareba tsoka nhatu, uye hapana anozoichinjira mafirimu mazhinji akagadzirwa naye. Kwandiri haisi hunhu. HH ishamwari Uyo waunoona nguva nenguva uye waungade kuve nehukama hwakawanda naye, asi asingatenderwe. Iye waunoda uye waunovenga nezviito zvake. Iyo yausingakanganwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Jo Nesbø. Makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Mamwe mazwi kubva kuvaverengi vake nezvake
Kudada kupi kuve chikamu chemhuri yekwaNesbo. Ndatenda
Mariola yekupemberera zuva rekuzvarwa raNesbo seizvi. Dai ndasangana newe uchifara chaizvo uye nemamwe akawanda mabhuku 😉
Ndatenda zvikuru, Nuria. Uye hongu, kudada kwakadii.